Isixeko soMlambo uMhlaba - Sombulula zonke iileta ezivela kwi-AZ online
Amanqaku anikwa njani kwiSixeko soMlambo weSixeko?
Izilwanyana kunye nezixazululo zomlambo welizwe lomzi
Iziqendu zeMihlaba yoMlambo kunye nezicombululo eziphakanyisiweyo
Imithetho yeSixeko soMlambo i-City Land ilula kwaye ikhawuleza ukuchaza: ukuba ukwazi ukudlala idolophu, umhlaba, umlambo owufunayo 2 okanye abadlali abaninzi. Umdlali ngamnye ufuna iphepha elingenanto yephepha le-DINA-4 kunye neepeni.
Imithetho yomhlaba wesixeko yomlambo womdlalo
Kwiphepha lephepha, abadlali benza itafile. Amagama aqhelekileyo abhaliwe phezu kwetafile.
Iqala nge sixeko, umhlaba, umlambo kunye nezinye izihloko ezifana nesityalo, umsebenzi, isilwanyana okanye izihloko ezingaqhelekanga ezifana nokutya, isiselo, imoto, udumo, isixhobo okanye ibhendi yefashoni. Izihloko kufuneka zixoxwe kwangaphambili nabanye abadlali.
Umdlali uthetha ngokukhawuleza i-alfabhethi ukusuka ku-A ukuya kwi-Z kwaye omnye umdlali kufuneka athi "Yeka" ngezinye iinkalo. Ngoku bonke abadlali kufuneka bafumane amagama odidi oluhambelana neleta ekhethiweyo. Ukongeza kweso sixeko, umhlaba kunye nomlambo, iindimu ze-classics ziyizilwanyana, izityalo, amagama kunye nemisebenzi.
Ngezantsi kweli phepha, sinika izixazululo zesampuli zeengongoma ezingapheliyo ezifana nezixhobo zomculo okanye iinkcazo.
Lowo oqala ukuzalisa iphepha ngokuthe ngqo uthi "yeka" kwaye bonke abanye abadlali kufuneka bavele phantsi phantsi ipeni yabo. Ngoku umntu wokuqala uqala ukufunda isigaba sokuqala. Amanqaku amagama asasazwa ngolu hlobo lulandelayo.
Ukuba abantu abaninzi banamagama afanayo, ngoko i-5 nganye ifumana amanqaku, ukuba umntu wedwa unayo igama, ufumana amanqaku e-10. Nangona kunjalo, ukuba umntu unegama elilodwa kwinqanaba, i-25 ifumana amanqaku. Ngoko ngamnye ujikelezo lulandela umgaqo ofanayo. Amanqaku ayongezwa emva komjikelezo ngamnye kwaye ekugqibeleni lowo unamanqaku amaninzi uwunqobileyo.
Iphulo ekusebenzeni: Iimvumba zenzeke phakathi kwabadlali xa ababhalisile ngabanye, ukuze bafikelele ngokukhawuleza, bhala imiqathango engenakulinganiswa kwiibhloko zabo. Ekubeni unokuvuma ukuba umlambo welizwe lomzi ulawula ukuba amaqela angaphandle kufuneka akwazi ukufunda imigaqo yokuba nesisombululo esisemthethweni.
Izikhokelo zokulanda nokuphrinta kumdlalo wakho ozayo
Isizwe seSixeko saseKhaya esikuhlaziya izihloko zakudala
IsiXeko seMihlaba yoMhlaba sokuhlaziya izihloko ezongezelelweyo
Izixhobo zomlambo zomhlaba weSixeko
Izikhumbuzo zeSixeko soMlambo weSixeko
Izixhobo zesisombululo zomlambo weSixeko
Isisombululo selizwe lesixeko seSixeko
Izixeko izixeko izixeko izixazululo zemveliso
IsiXeko seMihlaba yoMlambo iLizwe
Izixhobo zonyango zomhlaba weSixeko